चिकित्सक तथा प्रयोगकर्ताको आँखामा ओपिएट परनिर्भरता (Opiate Dependence) र मेथाडोन (Methadone) : Mental Health
चिकित्सक तथा प्रयोगकर्ताको आँखामा ओपिएट परनिर्भरता (Opiate Dependence) र मेथाडोन (Methadone)
लागु पदार्थ आजको समाजको एउटा नमिठो सत्य बनेको छ । बिशेष गरी कलिला युवा युवती उत्सुकता ले वा अन्य कुनै कारणले जानेर वा नजानेर यसको लतमा पर्न पुग्छन । त्यसो त कसको चाहिँ उदेश्य ‘ड्रग एडिक्ट’ बन्ने हुन्छ र ! पहिलो पटक खाँदा रमाइलोको लागी खाए पनि पछि गएर यसको दास बन्न पुग्छ मानिस । अनि बिस्तारै जीवन असाध्यै कष्टकर बन्न पुग्छ । यसको लत लागेको मानिस क्रमशः आर्थिक, सामाजिक शारिरिक तथा मानसिक समस्यामा पर्दछ ।
लागू पदार्थ समाजमा अस्वीकार्य र कानूनतः प्रतिबन्धित छ । जसले गर्दा दुव्र्यशनीमा फसेको मानिसले यस्को बारेमा आफन्तलाई भन्न चाहदैँन र सक्दैन । साथै अति महङ्गोमा लागु पदार्थ खरिद गरिरहेको हुन्छ । यसबाट छूटकारा पाउन आफ्नो सारा एकल प्रयास बिफल भएर हार नखाँदा सम्म घर परीवारमा बताउन प्रयोगकर्ता चाहदैन । जसले गर्दा प्रारम्भिक प्रभावकारी रोकथामका उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिँदैन । यसको सेवन गर्न थालेपछि स्वास्थ्य, पढाइ, जागीर छोड्नु, ब्यबसाय बिग्रनु अपराधिक गतिबिधिमा संलग्नता हुनु अवश्यमभावि परिणामहरु हुन ।
नेपालमा सन् १९९० सम्म मा पनि यसको प्रभावकारी उपचार भित्रीसकेको थिएन तर हाल आएर विभिन्न प्रकारका उपचार पद्धतिको माध्यमबाट थुप्रै प्रयोगकर्ता मुक्त पनि भए । यद्यपी ति उपचार प्रक्रियाबाट सत् प्रतिशत सेवनकर्ताहरु पूर्व अवस्थामा फर्कन सकेनन । बिभिन्न अध्ययनलाइ आधार मान्दा नेपालमा लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरुको संख्या झण्डै दूइ लाख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसो त आजका मिति सम्म पनि राज्यका तर्फबाट हेर्दा केहि नितीगत सम्वोधन भएको जस्तो देखिए पनि ती एच.आइ.भी., हेपाटाईटिस र रगतबाट संक्रमण हुनसक्ने रोगहरुको रोकथामसंग मात्र सम्बन्धित छन । कानूनी ब्यबस्थालाइ आधार मानेर हेर्ने हो भने लागु पदार्थलाइ अपराध करार दिएर प्रहरीले नै पक्राउ गरि थुनेर ठिक पार्छ भने जस्तो देखिन्छ । कानूनि नजरले लागु पदार्थ दुव्र्यशनीलाई अपराधी मान्न सकिएला तर यो एक प्रकारको मानसिक समस्या हो र यसलाई उपचार र परामर्शको आवश्यक पर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
१९९० को दशकमा ‘एच.आइ.भी.’ रोकथामलाइ लक्षित गरी आएको सूइ वितरण कार्यक्रम आजसम्म पनि चलिरहेको छ । तथापी सुई वितरण कार्यक्रमले लागु पदार्थको सेवनलाई प्रेरणा दियो भनेर यो कार्यक्रमले पनि सुरुमा धेरै बिवाद झेल्न परेको थियो । तर यसले ब्यक्तिको स्वास्थ रक्षा र एच.आइ.भी., हेपाटाईटिस र अन्य रगतको माध्यमबाट हुने संक्रमणलाइ धेरै कम पार्न मद्धत पुगेको अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । त्यति नै बेला मानसिक अस्पतालले सन् १९९२ मा संचालन गरेको मेथाडोन उपचार कार्यक्रम चरम बिरोधका साथै अन्य कारणले गर्दा सन् १९९८ सम्म आइपुग्दा बन्द नै हुन पुग्यो । फेरि आएर २००७ मा मानसिक अस्पतालमा, २००९ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा र हाल आएर देशका अन्य प्रमुख शहरहरु जस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज र वुटवलमा मेथाडोन कार्यक्रमको विस्तार भएकोछ ।
मेथाडोन के हो ?
यो बिश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त तथा नेपाल औषधि ब्यबस्था बिभागमा परिक्षण भई स्वास्थ्य तथा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत तथा अत्यावश्यक औषधिमा सुचिकृत एक नियन्त्रित ओपियड समुहमा पर्ने औषधि हो । यसलाइ मुखबाट सेवन गरिन्छ र यो झोल तथा चक्की दूबैमा पाइने भएपनि नेपालमा झोल ‘सिरप’ मा मात्र उपलब्ध छ । दुरुपयोगको संभावनालाई मध्यनजर गरी यसलाइ झोलमा मात्र पैठारी गरिएको हो । बिश्वको इतिहासलाइ हेर्ने हो भने ‘मर्फिन’ तथा ‘ओपियड’ को निर्भरता को उपचारमा पचास बर्ष देखि यसको प्रयोग भै आएको छ । ब्यक्तिको शारिरीक अवस्था र आवश्यकता अनुसार मेथाडोनको प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसले हानि गर्दैन । मानव स्वास्थ्यमा क्षति न्यूनिकरणका लागी यसको ठूलो योगदान छ ।
दोस्रो पटक सन २००७ मा काठमान्डुमा र २००९ मा पोखरामा पनि क्षतिन्यूनिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मेथाडोन कार्यक्रम सुरु भयो । तर यस कार्यक्रम आउनु पूर्व पत्रपत्रिकामा समेत ब्यापक बिरोध गरियो । एक राष्ट्रिय पत्रिकाले त बिष बाँडेको सम्म पनि भन्यो । जुन यस उपचार आवश्यक रहेकाहरु माथि अमानविय प्रहार थियो । सायद यो उपचार समयमा आइदिएको भए धेरै प्रयोगकर्ता ‘एच.आइ.भी.’ लगायत ‘हेपाटाईटिस’ र अन्य संक्रमणबाट बच्ने थिए । लागुपदार्थको लतमा फसेका मानिसहरु लागुपदार्थ प्रयोग नगरी बस्न सक्दैनन । उनिहरुले चाहेर पनि त्यसलाई छोड्न सक्दैनन । यसले उसलाइ खुसी भन्दा बढी नारकिय जीवन भोग्न बाध्य पारिदन्छ । त्यसैले लत लागेको ब्यक्तिलाई समयमै यसको उपचार गराउन र उत्तम बिकल्प पहिल्याउन सबैतर्फबाट मद्यत गर्नु पर्दछ ।
मेथाडोन चिकित्सकले लागुपदार्थ प्रयोगकर्तासँग राम्ररी सोधपुछको आधारमा उसले प्रयोग गर्ने गरेको ओपियडको गुणस्तर, मात्रा, अवधि र माध्यम (जस्तैः नशाबाट, ईन्जेक्सनको रुपमा, सुँघेर , खाएर वा अन्य कुनै माध्यम), सो कुरा बुझेर शारिरिक र मानसिक अवस्थालाई मध्यनजर गरि आवश्यकता अनुसार रगत र पिसाब को परिक्षण र बिशेष प्रकारको परामर्श, मेथाडोनबाट हुनसक्ने असरहरुको जानकारीपछि चिकित्सकको सिफारिसमा र नर्सहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा खुवाईन्छ । साधारणतया २० मि.ग्रा. बाट शुरु गरेर प्रयोगकर्ताको आवश्यकता अनुसार बिस्तारै मात्रा स्थिर नहुने बेलासम्म बढाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा औषत स्थिर मात्रा ४५ मि.ग्रा. देखि ५० मि.ग्रा. रहेको छ । जुन अवस्थामा पुग्नलाई २ देखि ६ हप्ता सम्म को अवधि लाग्न सक्छ । हाल नेपालमा ५०० को हाराहारीमा सेवाग्राहीहरु छन जस मध्ये ८० को संख्यामा पोखरामा छन ।
मेथाडोन सेवनका फाईदाहरुः
–आत्मसम्मान कायम राख्दछ ।
–असामाजिक क्रियाकलाप र गैह्रकानूनी क्रियाकलापमा कमी ल्याउँछ ।
–संक्रमणजन्य रोगहरुको रोकथाम गर्दछ ।
–जीवन पद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।
–मानसिक चिन्तामा कमी तथा अध्यात्मिक जागरण ल्याउँछ ।
¬–मितव्ययी बनाउँछ ।
–उत्पादनशिल कार्यमा संलग्न हुन सहयोग गर्छ ।
–समाज र परिवारमा गुमेको प्रतिष्ठालाई पुनस्र्थापित गर्न मद्धत गर्दछ ।
एक समय लागु पदार्थको दुव्र्यशनमा परेकोे र हाल मेथाडोन उपचारबाट सेवा लिइरहेका साथै परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेका एक साथीले मेथाडोन प्रतिको बुझाई र अनुभव यसरि व्यक्त गर्छन् ः
सामान्य उत्सुकता र प्रयोगका लागी गाँजा र ‘फेन्सिडील’बाट शुरुआत गरेपनि चुरोट रक्सीको अनुभव मलाइ यस भन्दा पहिले नै थियो । पछि आएर ‘ब्रुप्रिनर्फिन’ इन्जेक्सन गर्दै ‘ब्राउन सुगर’ सम्म र नशा नपुग्दा त्यहि इन्जेक्सनमा ‘फिनार्गन’ ,‘डाइजापाम’ समेत मिसाइ ‘ककटेल’ गर्ने , ‘ब्राउन सूगर’ भिटामिन ‘सि’ वा कागतिसंग मिसाइ पानीमा उमालेर सुइ लगाउने । त्यसमा ‘भेलियम’ ‘नाइट्राजिपाम’ जस्तो चक्की पनि खाने , आदत बस्न पुग्यो । जसले गर्दा आफ्नो ‘कलेज’को पढाइ छोडन बाध्य भएको र पछि आफ्नो ब्यबसाय पनि गुमेको, भएको सम्पति मास्न परेको, तिन ठाउँमा फरक फरक समयमा नोकरी गरेको मैले ती सबै छोड्न परेको यथार्थ मैले सामना गरेँ । मैले आफ्नो लागु औषधको समस्या समाधानका लागी पचासौँ पटक बिभिन्न प्रकारका उपचार पनि लिएँ । कहिले शहर छोडि दूर्गम गाउँ पूगेँ भने कहिले आवासगृहमा र अस्पतालमा गएर महिनौँ बसेँ त्यति मात्र होइन डिटक्सिपफिकेसन का लागी बिसौँ पटक औषधि प्रयोग गरेँ । तर कुनै उपाय लागेन ।
जब पोखरामा ‘मेथाडोन’ उपचार सुरु भयो । यस उपचार लिन थालेपछि हामीलाइ यो एकदम खतरनाक भएको, पछि डरलाग्दो ‘सिक्’ हूने, दिमाग विग्रेर पागल हुने लगायत धेरै डर देखाइयो । हडडी कुहिने, दाँत झर्ने जस्ता कुरा सुनिन्थ्यो । कसै कसैलाइ बान्ता पनि भएको थियो । यस्तो हल्लाले गर्दा हामी ‘मेथाडोन’ नखाने निर्णयमा करिब करिब पुगेका थियौँ । तर एक दिन हेरौँ ,दूइ दिन बिचार गरौँ भन्दा भन्दै दूइ महिना पनि बित्यो । शरीर केहि गलेको, दूब्लाएको, पनि महशुस हून्थ्यो । तर तिन महिना जतिमा मैले शरीरको तौल दुइ किलो बढेको पाँए । पछि पछि स्वास्थ्य राम्रो हुँदै पनि आयो । मगज बिग्रने भनेको यो ओखति भाग्यवश हामीले मानसिक रोग बिशेषज्ञको सिफारीसमा खाईरहेका थियौँ ।
“जब म मेथाडोन उपचारमा आएँ मेरो जीवन स्थीर रहन पूग्यो । मेरा बिग्रेका सबै पक्षमा क्रमिक सूधार हून थाल्यो । आज म यस कार्यक्रममा सामाजिक इकाइको परामर्शदाता रहि अन्यको उपचारमा सघाइरहेको छू । मेरो लागी अस्पताल एक स्वर्ग मेथाडोन इकाइ एक मन्दिर र डाक्टर तथा परामर्शदाताहरु भगवान ठहरिए र मेथाडोन अमृत सरह नै रह्यो । मेरो अनूभवको आधारमा भन्दा मेथाडोन उपचार जस्तो सर्वोत्तम बिकल्प लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताको लागी अरु छैन । यस उपचारमा रहेर उपचार गर्दा पढाइ, जागीर वा अन्य कूनै काम रोक्न पर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले म लत लागेका अन्य साथीहरुलाइ ढिला नगरी यस उपचारमा आउन सल्लाह दिन चाहन्छु । त्यसैगरि यस कार्यक्रमलाई शुरु गर्न र यथावत चलिराख्न मद्धत गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।” – ड्यूक कोईराला
लागु पदार्थ सेवन गर्न थालेको थाहा पाउने केहि संकेतहरुः
–कोहिपनि व्यक्ति काम भन्दा बढि समय घर बाहिर बिताउने ।
–जथाभावी पैसाको ब्यबहार र बहाना धेरै बनाउँने ।
–गोजिमा केहि धूलो साथै चूरोट लाइटर वा झिलझिले कागजहरु भेटिने
–दाग लागेको डबल र एक छेउ अलि गाडा कालो खैरो धर्का देखिने नोट बारबार भेटिने ।
–छिनछिनमा रिसाउने, खुसी हुने, बढी सक्रिय हुने वा अल्छी हुने, टोलाउने वा निराश हुने
–बिद्यालय वा कलेज वा जागिरमा नियमीत हाजिर नहुने ।
–घरको सरसामान, गरगहना आदि अचानक हराउने ।
–अनौठा पोस्टर, बस्तु आदि संग्रह गर्ने ।
–कहिले मध्यरातसम्म नसुत्ने र बिहान अबेला सम्म पनि सुतिरहने ।
–घर आगन कोठा तिर सुईहरु फेला पर्ने । शरिरमा सुईको जस्तो दाग र निलो डाम देखिने साथै शरीरबाट अनौठो गन्ध आउने ।
उपयुक्त संकेतहरु देखिएमा वा शंका लागेमा चिकित्सक वा परामर्शदाताहरुसँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ ।
अन्तमा लागु पदार्थ सेवन ब्यत्तिको अत्यन्त पिडादायी र गम्भिर समस्या हो । लागु पदार्थ सेवनलाइ मानसिक समस्या मानिन्छ । प्रयोगकर्ताको चाहना बमोजिमको उपचार बिधी उसको अधिकार हो । घृणा, तिरस्कार र सजायले समस्या कम गर्नुको बदलामा थप जटिल मात्र बनाउँदछ । साथै लागु पदार्थमा निर्भरहरुका लागी सामाजिक पुर्नस्थापना तथा सिपमूलक तालिम र रोजगारी अति आवश्यक छ । आज पनि सडकमा थूप्रै प्रयोगकर्ता पिडित भएको अवस्थामा रहेका छन । लागू औषधको समस्यालाइ जबसम्म सरकारी स्तरमा सम्बोधन गरीँदैन तबसम्म समस्या यथावत रहनेछ । प्रयोगकर्ताहरुलाइ शशत्तिकरण गरी लागुऔषध नियन्त्रण तथा प्रभावकारी रोकथामका लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ । ‘मेथाडोन’ त्यो औषधि हो जसले अवैध लागु औषधको बजारलाइ सदाका लागी बिस्थापित गरिदन सक्छ । ‘मेथाडोन’ प्रयोगकर्ता प्रति सबैको माया ममता सदभाव र स्नेह अनि सहयोग र सुझावको नितान्त आवश्यक छ ।
डा. राजन शर्मा, मानसिक रोग बिशेषज्ञ, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरा
ड्यूक कोईराला, परामर्शदाता, मनिष केयर फाउन्डेसन
(लेखकद्धय पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल अन्तर्गत मेथाडोन कार्यक्रममा कार्यारत छन ।)